China ngwa anya Brightener CBS-127 Manufacturer and Supplier | BGT
Na-akọwapụta Onye Ọrụ
Ihe mgbakwunye maka plastic
Ihe na-atọ ụtọ na-arụ ọrụ
Ink Remover BT-301/302
PITA Akwụkwọ mmado Remote BT-336
Ngwa anya Brightener CBS-127
Ndewo, bia lee ngwaahịa anyị anya!
Na-agba ume Nucleator BT-20
PITA na-ekpokọta PET-98C
Polyester & naịlọn Nucl ...
Ngwa anya Brightener OB-1
Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9805
Optical Brightener CBS-127agbakwunyere ọtụtụ ihe iji belata acha edo edo, melite ọcha, ma bulie nchapụta nke ngwaahịa. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe na ahịa plastik. N'ihi ikike ya na-egbukepụ egbukepụ dị mma, ezigbo nkwụsi ike ọkụ, yana ndakọrịta na ọtụtụ ndị polymer.
Bright acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ green crystal ntụ ntụ
Ezigbo ihe na-acha ọcha ma na-egbuke egbuke maka akwa polyester-owu. Karịsịa dị iche iche iche iche nke plastic ngwaahịa dị ka PITA, eyi, PC, PS, Pee, ịkwanyere. Mana ọ dị mfe ịkwaga na PE na plastic dị ala.
25kg eriri drums na Pee liner.
Ìhè acha ma ọ bụ mmiri ara ehi na-acha ọcha ntụ ntụ
A ọma whitening gị n'ụlọnga maka ịkwanyere, PS, Pee, eyi, ABS, thermoplastic plastik, acetate eriri, agba, mkpuchi na-ebi akwụkwọ ink, wdg
Ìhè odo kristal ntụ ntụ
A ọma whitening mmetụta dị iche iche plastic na plastic ngwaahịa, dị ka ịkwanyere, Polypropylene, uzo elu-ọkwa plastic ngwaahịa. Itacha ọcha mmetụta bụ ihe ndị ọzọ magburu onwe. Karịsịa itinye ya n'ọrụ na PVC ngwaahịa dị nro.
(Kwuru, sị: Ozi nke ngwaahịa anyị bụ maka ntụnye naanị. Anyị anaghị aza ajụjụ maka nsonaazụ a na-atụghị anya ya ma ọ bụ esemokwu patent kpatara ya.)
OB-1 nwere ike melite ịcha ọcha nke Polymerized Recycled: Site n'iji ihe eji anya anya, uru nke ihe a na-emegharị nwere ike ịbawanyewanye uru site na ịnye ọcha na-acha ọcha. OB-1 ga-eme ka ịcha ọcha kawanye mma, Ngwa ngwa ngwa kwesịrị ịchọ naanị 200-300 ppm na polymer ọhụrụ, mana ihe eji emegharị emegharị nwere ike ịchọ ihe dịka 300-450 ppm. Ihe ndị na-egbuke egbuke anya dị ezigbo mma iji melite ọdịdị nke polymer ma ọ bụ eriri. Off-class ma ọ bụ nke abụọ-mma naịlọn polima nwekwara ike mma n'otu ụzọ ahụ.
OB Njirimara magburu onwe ya iguzogide okpomọkụ, ihe ndị na-acha ọcha, ezigbo ọkụ ọkụ na obere volatility. Ngwa dị iche iche gụnyere eriri, isiokwu ndị akpụziri, ihe nkiri na mpempe akwụkwọ. A ga-ejikwa ya na lacquers doro anya, lacquers pigmenti, agba, ink na-ebi akwụkwọ yana akpụkpọ anụ sịntetik. Ọ ga-emepụta nchapụta na-egbuke egbuke na dyestuff, nke na-arụ ọrụ nke ọma na ntụziaka maka ọtụtụ agba.
CBS-127 bụ Optical Brightener metụtara na polymer, karịsịa maka PVC na phenylethylene ngwaahịa. Enwere ike itinye ya na polymer dị ka ụcha. Na-enwu gbaa na-acha ọcha na agba ga-eweta na ngwaahịa ma ọ bụrụ na-eji ala ịta nke CBS-127 yana anatase titania. Ta nkeCBS-127 kwesiri itinye mgbakwunye ma ọ bụrụ na a ga-eji rutile anatase titania mee ihe.
(Maka nkọwa na TDS zuru nwere ike ịnye dị ka kwa arịrịọ site na “Hapu Ozi Gi”)
Nke gara aga: Ngwa anya Brightener OB
Ngwa anya Brightener CBS
TIANJIN Kacha mma inweta sayensị na nkà na ụzụ CO., LTD
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa, biko hapụ gị e-mail na anyị ma kpọtụrụ anyị n'ime 24 awa.